Sunday July, 05 2020 - 23:46:23
Thursday June 04, 2020 - 10:41:50 in by salman abdi
Waxaa wali ka socda dalka Mareykanka dibadbaxyaddii ka dhashay dilkii nin madow ahaa oo lagu magacaabo George Floyd.
Mr Floyd ayaa geeriyooday ka dib markii askeri caddaan ah uu qoorta uga istaagay ka dib -na uu geeriyooday.
Geerida George Floy waxaa ka dhalatay caro horseeday dibadbaxyo rabshada wata.
In ka badan 75 magaalo ayey mudaharaadyada looga soo horjeedo dilka George Floyd ka socdaan.
Waddooyinki maalma badan oo hawanayey xayiraadaha corornavirus awgii waxaa buux dhaafiyey mudaharaadyo tira badan oo garbaha isku haya.
Goobaha ay dibadbaxyada waawayn ka dhaceen waxaa ka mid ah gobolka Minneapolis ee ay soomaalida ku badan islamarkana ah goobtii uu ku dhintay George Floyd.
Soomaalida ayaa kaalin wayn ku leh dibadbaxyadan caddaaladda loogu raadinayo George Floy, waxaana la arkayay dhilinyaro haween soomaali ah oo watta boorar ay ku qoran yihiin erayo muujinaya sida ay uga xun yihiin dilkaasi lo gaystay ninkaasi madowga ah.
Balse waxaa jirta su'aalo ay dad badan oo Soomaali ah is waydiinayaan taasi oo ku aadan faquuqa iyo takoorka ay Soomaalida gudaheeda isku hayso.
Waxaa jira dhacdoyiin badan oo waxyeelo loogu gaystay dad Somaali ah kuwaasi oo la xiriiray Heeb-sooc iyo faquuq taasi oo aysan jirin cid Soomaali ah oo ka dhiidisay.
Image captionAaska marxuum Axmed Dowlo
Dilkii Axmed Dawlo
Tusaale haddii aan u soo qaadano dhacdadii ugu dambeysay ayaa ahayd tii sida arxan darada ah loo dilay Axmed Mukhtaar Saalax (Axmed Dowlo).
Dilkaasi waxaa uu dhacay bartimihi bishii September ee 2018, balse ma jirin cid dhigtay dibadbax ay ku muujinayso sida ay uga xuntahay.
Malin Khamiis ah ayey ahayd markii si foolxun loogu dilay xaafadda Towfiiq ee magaalada Muqdisho marxuum Axmed Dowlo oo aan wax shaqo ah ku lahayn sababta dilkiisa. Baangado, eebooyin, iyo ugu dambayn dab iyo baasiin ayey isugu dareen dad ilaa shan qof gaaraya oo ugu yaraan laba ka mid ah la sheegay inay dumar ahaayeen.
Lahaanshaha sawirkaDALSAN TV
Image captionXaasaskii uu marxuumka ka dhintay. Siciido Aweys iyo Farxiya Axmed
Marxuumka ayaa ifka uga tegey laba xaas, 12 carrur ah, iyo aabihiis oo waayeel ah, shalay ayaana lagu aasay qabuuraha Barakaat ee magaalada Muqdisho.
Heybsooca Soomaalida ee aan laga hadlin
Dilka marxuum Axmed Dowlo wuxuu banaanka u soo saaray arrin aan aad looga hadlin oo ah in haybsooc iyo faquuq uu ka dhex jiro bulshada dhexdeeda, sidaasoo ay tahayna aan laga hadlin.
Alle ha u naxariistee Prof Cumar Eno oo ahaa aqoonyahan u ololeyn jiray sidii ay Soomaalida uga gudbi lahayd Heybsooca ayaa mar uu ka hadlayay waxaa uu sheegay in Soomaalida ay iyagu is faqooqaan, balse marka qurbaha la joogo oo ay takoor la kulmaan ay ka caroodaan.
"Waxaan ku shaqeysanaa farsamada gacanta, waxaadna nagu caynaysan inaan farsamada naqaano, ayuu yiri.
Nin ku taajiray hal maalin gudahood kaddib markii uu helay dhagaxaan qaali ah
25/06/2020 - 10:56:03
Daawo:-Sidee u arkaan Soomaalida Magalada Nairobi Xilka laga Qaaday Aadan Bare Ducaale.
23/06/2020 - 17:00:21
Trump oo qaaday tallaabo kale oo caqabad ku ah muhaajiriinta
23/06/2020 - 10:05:35
War Deg Deg Ah:-S.land Oo Kiisas Hor Leh Laga Helay Xanuun Xili Ay Jiraan Dabad Baxayo Lagu Taageerayo Madaxweyne biixi.
18/06/2020 - 11:43:28
War Deg Deg Ah:-Dowladda Soomaaliya oo mar kale dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada gudaha
17/06/2020 - 17:05:22
Gudaha:-"Farmaajooy Ku Dayo Abby Oo Sida Uu Eretariya Ugu Tanaasulay Ugu Tanaasul Somaliland " Xil Xasan Sha
16/06/2020 - 13:31:22